စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ရိုးရာနှင့်ခေတ်သစ်, တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနှင့် hectic, တရုတ်သည်စူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်ရထားနဲ့. တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရန်စီစဉ်ခြင်းသည်အလွန်ကြီးမားနိုင်သည်, အကျွန်ုပ်တို့သည်စုဝေးပါပြီ၊ 10 ရထားနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာအကြံဥာဏ်များ. ထုပ်ပိုးမှသည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ဒဏ္ofာရီ၏ပြည်, မင်းဆက်များ, ယဉ်ကျေးမှုများ, နှင့်ကြီးစွာသောမှော်တရုတ်တည်ဆောက်ခြင်းလူများ, ၏အိမ် 10 တရုတ်ပြည်သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးမော်ကွန်းနေရာများ. နေရာတိုင်းသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်, တိုင်း cobblestone အတွက်ရှေးဟောင်းပုံပြင်များကိုပြောပြ, တံတား, နှင့်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ရေ 1000 ရေကန်များ. လာမည့် 10 အများဆုံးမော်ကွန်း…